Adelic laser diode vaovao – ny safidinao tsara indrindra amin'ny hodinao!
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-06-02
Ho avy indray ny fahavaratra, ny volo be loatra ve no tena mahasadaikatra anao mandritra ny asa sy ny fiainana? manana traikefa tsara amin'ny fanesorana volo ve ianao, ary mahazaka ny fanaintainana mandritra ny fitsaboana ny volo nentim-paharazana? Amin'ity taona ity dia afaka manana safidy vaovao ianao amin'ny fanesorana volo --- Dil ...
DPL Precision famelomana hoditra - ny vahaolana tsara indrindra amin'ny fakana sary amin'ny hoditra
Sarin-koditra Rehefa feno taona antonony ny olona, ​​manomboka amin'ny maitso ka hatramin'ny matotra dia manomboka manonta ny dian-tongotr'izy ireo amin'ny tarehy, tasy, ketrona, ra mena, pores lehibe kokoa, hoditra mainty ny olona, ​​hany ka tsy miahiahy tena fotsiny ny vehivavy: "Tena antitra tokoa? " Fa rehefa mijery tsara ny hoditrao ianao dia ...
Fa maninona ny 3D HIFU tsy mampihetsi-po amin'ny fanandratana ny hoditra no ambony?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-05-18
Ny fanamafisana ny tsy fandidiana amin'ny alàlan'ny fampiasana HIFU Non-surgical Skin Lifting dia iray amin'ireo fomba fampiasa indrindra amin'izao fotoana izao. HIFU ny teknolojia ampiasaina amin'ny fampiakarana ny hoditra dia maneho ny 0 farany sy mandroso indrindra amin'ity faritra ity izay tsy misy afa-tsy ses ...
Fitsipika volamena manala volo: tsy mila manala volo isan-taona
Mihabetsaka ny maripana ary miha mahia ny akanjo. Raha misy volo tsara tarehy manana volo matevina amin'ny vatana, dia ho very ny vehivavy azy. Mba ho tsara tarehy, ny fanesorana volo no dingana voalohany. Vonona ve ianao? Meth fanesorana volo nentim-paharazana ...
Laser depilation – Diler Pro
Ny hafanana mampiadana amin'ny lohataona dia tsy hiteraka hatsembohana be loatra amin'ny hoditra, ka hisy fiatraikany amin'ny hoditra voajanahary. Izy io dia afaka manao ny effet depilation hahatratra ny fanjakana tsara indrindra ary hahatonga ny hoditra ho voafintina sy malefaka ary fotsy kokoa. Karazan'olona manao ahoana a ...
Adelic manome alalana: Ny tobin'ny Angelo Fernando's Hospital Laser Est
CO2 Ny masinina laser tapaka dia ny rafitra laser miendrika fizika hoditra Co2 miandalana indrindra, izay fitaovana tsotra, haingana, mahomby ary ahazoana aina amin'ny fanesorana ketrona, fery malemy, fanavaozana ny hoditra ary famerenana indray, fanamafisana ny fivaviana. Manana maody telo izy: C ...
Adelic Laser ao amin'ny Istanbul Beauty Eurasia Expo
Ny Expo Beauty Eurasia momba ny taona 2019 dia nanomboka tamin'ny 20 - 22 Jona tamim-pahombiazana. Nanatrika ity fampirantiana matihanina ity ny laser Beijing Adelic ary nampiseho ireo fitaovan-tsika mivarotra, nanamafy ny fiaraha-miasa misy, namolavola mpanjifa maro an'isa. Napetraka ny fou ...